Dị nnọọ okporo mmiri gị ochie Android ekwentị maka onye ọhụrụ, dị ka Samsung Cheta 4, na chọrọ mbubata kọntaktị niile si a CSV faịlụ ka ya? Ịchọ ụzọ mbupụ Android kọntaktị na a CSV faịlụ, otú i nwere ike mfe bipụta ya si ma ọ bụ bugoo gị Google, Outlook, Windows Address Book akaụntụ? Ọ bụ otu nke achicha. Ke ibuotikọ emi, ga-amasị m na-egosi gị esi mee ka ọ kwụpụ site nzọụkwụ.
Part 1: Olee mbupụ Android Ndi ana-akpo ka CSV
Part 2: Olee mbubata CSV Ndi ana-akpo ka Android
Part 1. Olee mbupụ Android Ndi ana-akpo ka CSV
Mbupụ Android kọntaktị dị ka a CSV faịlụ, ga-amasị m ike ikwu na ị ihe dị mfe na-eji freeware - Wondershare MobileGo. Ọ bụ a pụrụ iche ibu mobile toolbox, nke na-enyere aka gị dị mfe Android ndụ. Na ya, i nwere ike ịzọpụta niile ma ọ bụ kọntaktị ahọrọ dị ka a CSV faịlụ mfe na effortlessly.
The akụkụ n'okpuru na-egosi gị otú ị nyefee kọntaktị site na Android ka a CSV faịlụ. Soro akụkụ a na-agbalị ya na gị onwe gị.
Nzọụkwụ 1. Run Wondershare MobileGo na Jikọọ gị akporo ekwentị na kọmputa
Na mbụ, ibudata ma wụnye a software na gị Windows kọmputa. Agba ya na nkwụnye n'ime eriri USB kọmputa na-esi gị Android ekwentị ejikọrọ. Na-aṅaghị ejikọrọ? Pịa ebe a >>
Gaa na elu nri akuku na pịa ịbanye ma ọ bụ banye maka gị Wondershare Passport. Dị ka ị maara, ị nwere ike gị banye Facebook, Twitter, Google ma ọ bụ YouTube na akaụntụ.
Nzọụkwụ 2. Save Android Ndi ana-akpo dị ka a CSV File
Na-ekpe sidebar, pịa Ndi ana-akpo. Na kọntaktị management window, họrọ otu kọntaktị, Atiya, dị ka ekwentị. Mgbe ahụ, họrọ kọntaktị ị chọrọ mbupụ na pịa Export. Na ya adaala menu, họrọ Export kọntaktị ahọrọ na kọmputa ma ọ bụ mbupụ niile kọntaktị na kọmputa.
Mgbe ị na-6 nhọrọ: na-vCard faịlụ, ka CSV faịlụ, ka Outlook Express, ka Outlook 2003/2007/2010/2013, ka Windows Akwụkwọ Adreèsị, ka Windows Live Mail. Họrọ ka CSV faịlụ. Na mmapụta faịlụ nchọgharị window, họrọ a ebe ịzọpụta CSV faịlụ na pịa Save.
Ugbu a, ị ọma ịzọpụta Android kọntaktị dị ka a CSV faịlụ. Ọ bụghị ya mfe?
Part 2. Olee mbubata CSV Ndi ana-akpo ka Android
Ọ bụ ihe brainer mbubata CSV ka Android. Niile ị chọrọ bụ a Gmail akaụntụ. Dị nnọọ bulite CSV faịlụ gị Gmail na akaụntụ, na mgbe ahụ mmekọrịta akaụntụ na gị Android ekwentị. Otú mfe ọ bụ. N'okpuru ebe bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu. Soro ya.
Nzọụkwụ 1. Open Brower na kọmputa gị na ala Gmail. Banye na gị Gmail akaụntụ.
Nzọụkwụ 2.-aga n'aka ekpe kọlụm na pịa Gmail. Na ya adaala menu, họrọ Ndi ana-akpo.
Nzọụkwụ 3. Click More ... Na ya adaala menu, họrọ Import ...
Nzọụkwụ 4. a na-eweta elu a dialog. Pịa Họrọ File. Na mmapụta faịlụ nchọgharị window, ịnyagharịa ebe CSV faịlụ a zoputara. Họrọ ya na pịa Open> Bubata bulite na CSV faịlụ gị Gmail akaụntụ. Kwụpụ 5. Ugbu a, kọntaktị niile na CSV faịlụ na-uploaded gị Gmail akaụntụ.
Nzọụkwụ 6. Sign gị Google akaụntụ na gị Android ekwentị. Mgbe ahụ, na-aga Ntọala> Accounts & mmekọrịta. Chọta gị Google akaụntụ na enweta ya. Mgbe ahụ, nne Mmetụta mmekọrịta Ndi ana-akpo> mmekọrịta ugbu a. Mgbe ọ bụ zuru ezu, niile CSV kọntaktị ga-adị gị Android ekwentị.
Nzọụkwụ 7. Ọ na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere a google akaụntụ na gị Android ekwentị. Ị ka pụrụ bubata kọntaktị ka Android si a CSV faịlụ.
Dị nnọọ ikwu Nzọụkwụ 6 na pịa More ...> Export ... Họrọ otu ebe niile CSV kọntaktị na-azọpụta. Mgbe ahụ, họrọ ịzọpụta dị ka vCard format. Pịa Export ibudata vCard faịlụ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 8. Ugwu gị Android ekwentị dị ka ihe mpụga ike mbanye. Ozugbo achọpụtara ọma, na-aga na kọmputa na-ahụ gị na Android ekwentị.
Nzọụkwụ 9. y'otú Android ekwentị. All nchekwa na faịlụ echekwara na SD kaadị na-egosipụta na n'ihu gị. Dị nnọọ idetuo na mado na vCard na faịlụ a.
Nzọụkwụ 10. On gị Android ekwentị, mgbata Ndi ana-akpo ngwa. Enweta Ndi ana-akpo udi na pịa mebere button ekpe ndị isi button na-egosi menu. Họrọ Import / Export> Bubata si USB nchekwa> Bubata si SD kaadị (Ọ pụtara mpụga SD kaadị.)
Nzọụkwụ 11. A dialog abịa si,-arịọ gị ka ichekwa kọntaktsị na ekwentị ma ọ bụ gị akaụntụ. Họrọ onye na gị Android ekwentị amalite ịchọ vCard faịlụ. Mgbe ọ mere, họrọ Import vCard faịlụ> OK. Mgbe ahụ, na kọntaktị niile na vCard faịlụ a ga-ibubata gị Android ekwentị.
Ụzọ kasị mma hichapụ gị nchọgharị akụkọ ihe mere na Google search akụkọ ihe mere eme
2 Ụzọ na nkwado ma weghachite Huawei ekwentị mkpanaaka na
> Resource> Android> Easily Export / Import CSV Ndi ana-akpo si na Android ekwentị mkpanaaka na